प्रदेशी गायक सुर्य खड्काले नवराज तिमल्सिना (एकान्ते)संग खोले प्रदेशको पीडा र सांगीतिक जिवनका उतर/चढाब (अन्तरवार्ता) – Enepal Khabar
“गित संगीतमा लागेर दाम भन्दा बढी दर्शक श्रोताको माया पाएको छु, यो मायाले मलाइ अझ धेरै हौसला मिलिरहेको छ, म जहाँ रहेपनी नेपाली लोकगित संगीतको स्तर उन्नोति बिकास संरक्षण र सम्बर्द्धन मा निरन्तर लागिरहने छु।”
गायक एवं सर्जक: सुर्य खड्का
www.eनेपाल खबर डट कम का अध्यक्ष ‘राजन क्षेत्री’ को सहयोगमा लोकदोहोरी गायक एवं सर्जक सुर्य खड्कासँग eनेपाल खबर डट कमका सम्पादक ‘नवराज तिमल्सिना ‘एकान्ते” ले लिएको अन्तर्वार्ताको पुर्ण अंश।
प्रस्न न १: 👤गाउँ घरमा बिहे बटुलो पुजा ब्रतबन्ध र रत्यौलिमा मादल बजाउनको निमित्त निमन्त्रणा पाउने गरेको सुर्य खड्का र जापानमा दैनिक १० घण्टा कामको समयपछि फुर्सदको समयमा संगीत साधना गर्ने सुर्यमा के फरक छ?
👱👉हुन त तेति बेलाको बिहे बटुलो र पुजा ब्रतबन्धले नै मलाई धेरै कुरा सिकाएको हो तर पनि त्यति बेला रहरै रहरमा हिडिन्थ्यो.. तर अहिले देश प्रतिको मायाँ मार्न नसकेर परदेशको दु:ख पिडा भुलाउन र अनि आफ्नो नशा नशामा बगेको संगीतको रगतले गर्दा साथै धेरै दर्शक स्रोताको मायाँले गर्दा साधना गरिरहेको छु।
प्रस्न न २: 👤यतिमिठो गलाकला को धनी गायक सुर्य खड्कालाइ स्वदेशमा बसेर गित संगीतमा लागेर सफल हुने संभावनाको अन्त्य भएर परदेशी हुनुभएको कि? धेरै पैसा कमाउने र झ्याप्पै ठूलो मान्छे हुने भनेर हो?
👱👉मैले गाउने बजाउने त सानै देखीनै गर्थे।तर नेपालमै बसी गीत सँगीतमा लागेर बाँच्न तेती सहज पनि थिएन। फेरी म नेपालमै चर्चित बनेर धेरै पैसा कमाउन बिदेश छिरेको कलाकार पनि होईन। परदेशमै बसेर पनि सबैको साथ सपोर्ट र मायाँले यति सम्म गर्न सकेको छु यसैमा खुसी छु म।
प्रस्न न: ३ 👤 माध्यमिक स्तरको पढाइपछी पनि तपाईंले आफ्नो जन्मथलो बाग्लुङ लाई कर्मथलो बनाउन सक्नु भएन र तपाईं चितवनको ढोका ढक-ढकाउदै चितवनको समथर तिर लाग्नु भयो!! बाग्लुङ कालिकाको भन्दा चितवन कालिकाको आशिर्वाद ले बढी जितेर हो?
👱👉होईन। तेती बेलाको परिस्थिती तेस्तै भएर हो,आफ्नै देश भित्र जुन कुनामा गएर आफ्नो अध्यन वा आफ्नो काम जे गर्न सकेनी गर्व गर्नु पर्छ। जाहाँ पुगे पनि आफु जन्मेको माटोलाई कहिलै भुल्नै सकिदैन।
प्रस्न न : ४ 👤 पढाई सङ्गै संगीतमा पनि लागिरहन कतिको सहज थियो तपाईंलाइ चितवनमा?
👱👉 खास राम्रो अध्यन गर्छु भनेरै बाग्लुङ बाट चितवन झरेको थिए। धेरै गाह्रो नै थियो पढाई अनि गीत संगीत लाई सँगै लिएर हिड्दा।। गीत संगीतले गर्दा थोरै पढाईलाई अफ्ट्यारो पनि पारेको थियो।।
प्रस्न न: ५ 👤गायक सुर्य खड्का गायक हुनुभन्दा पहिलेको पेशा के हो भनेर मैले सोधे रिसाउनु हुन्न नि? र अहिले पनि जापानमा मात्र गितै गाएर मात्र गाएर त बस्नु भएको छैन नि!! तपाइको रोजाइमा जिविकोपार्जन गरिरहेको काम ठूलो कि धेरैले माया गरेर लागेको संगीत ठूलो?
👱👉 मेरो तेती रिसाउने बानीनै छैन मज्जाले सोध्दा हुन्छ। खास मेरो त्यस्तो पेशा नै त खासै थिएन। सानै देखी आफ्नै घरको खेती किसानको काम निकै गर्थें,बाबाकै पैसामा क्याम्पस सम्म पुगेको हु।
अहिले पनि परदेशमा छु यहाँ मात्र गीत गाएर पुग्दै पुग्दैन। म यहाँ बिशेष Working भिषामा छु, १०/१२ घण्टा काम पनि गरिरहेको छु। गीत सँगीतमा पनि लागीरहेको छु।। मेरो लागी त दुबै ठुलो हो दुबैलाई सँग संगै अगाडि लानेछु।।
प्रस्न न: ६ 👤अबको तपाइँको उदेश्य के हो अरु नै कुनै राम्रो देश ( युरोप/अमेरिका) जाने कि? जापान मा नै स्थापित भएर बस्ने कि या स्वदेश फर्केर देशकै माटोको सुघन्धमा संगीत साधना गर्ने?
👱👉 हे… हे नाई अब मलाई परदेश पुगी सक्यो। सके सम्म सबै मेसो मिलाएर आफ्नै देशमा गएर पुरा समय संगीतमा साधाना गरेर बिताउने मन छ।।
प्रस्न न: ७👤 दर्शक श्रोताहरुले असाध्यै मन पराइएको कलाकारहरुको सुचिमा पनि अग्रपंक्तिमा पर्नुहुन्छ। कतिको सहज थियो सुरुवाती सुरुवाती दिनहरु लोकगित संगीत मा लागेर केही गर्छु, नाम दाम कमाउछु भनेर लाग्दाको कल्पना र वास्तविकता?
👱👉धन्यवाद बढि मन पराइको सुचिमा हुनुहुन्छ भन्दिनु भएकोमा तर अझै म गायक हु जस्तै लाग्दैन.. गीत संगीतमा मैले साधान गर्न धेरै बाँकि छ। बल्ल ताते ताते गर्दै छु। गीत संगीत मा लागेर केही गर्छु भन्ने छ दाम भन्दा पनि मायाँ पाईरहेको छु अझै मायाँ कमाउने छु भन्ने आशामा मेहनत गरिरहेको छु।
प्रस्न न: ८👤गायक सुर्य खड्काको औपचारिक साङ्गितिक जिवनको सुरुवात कहिले कुन गित बाट भएको हो? आजसम्म कति गित गाउनु भयो? आफैले गाएको गितमा पनि आफुलाइ सार्है मन पर्ने गित कुन हो र सामान्या सुर्य बाट सेलिब्रेटी सुर्य बनाएको गित कुन हो?
👱👉 गाउने बजाउने सानै देखी गरेता पनि मेरो पहिलो औपचारिक सांगीतिक सुरूवात २०६८ सालमा ‘मुटू छोएर त हेर’ भन्ने गीत बाट भएको हो। अहिले सम्म ६ दर्जन जती गीतमा आवाज दि सकेको छु.. आफुलाई आफ्नो गीत सबै राम्रो लाग्छ तर मलाई अली बढि चिनाएका
१) दशै गीत कोदो
२) खाडि मुलुकको पिडा
३)हरेक दिन नेपाली परदेशैमा रुन्छ
४)घडि दियौ उपहार मायाँले
५) ४ बजेको आलाराम
लगाएत तिजका गीतहरुले पनि चिनाएको छ।।
प्रस्न न: ९👤सफल गायक सुर्य खड्काको जिवनले पनि विभिन्न आरोह र अबरोह त पार गरेकै छन। सुखदुःख लगाएत हरपल हरक्षण हरेक क्षेत्रमा हौसलाको बाटोमा डोर्‍याउने हात र अभिभावक कस्लाइ मान्नुहुन्छ?
👱👉 पक्कै पनि अफ्ट्याराहरु त आउछन नै कुनै पनि काममा निरन्तर अगाडि बढि रहनको लागी आफ्नो परिवारको राम्रो सपोर्ट चहिन्छ।मैले त्यो पाएको छु। सँगै मलाई सामाजिक संजाल बाटै धेरै दर्शक स्रोताले मायाँ पनि गर्नु भएको छ उहाहरुकै मायाँले उर्जा मिलिरहेको छ। त्यसैले मेरा अभिभावकको हकदार सबै हुनुहुन्छ।
प्रस्न न: १०👤सामाजिक सन्जाल facebook मा सबैले राजा नै भन्छन तपाइँलाई। “परदेशी गायक”को उपनाम पनि मिलेको छ आखिर परदेश बाट नै गित संगीतमा लाग्ने धेरै गायक/गायिका हरु छन। त्यसमध्येमा तपाइँकै नाम र तपाईं लाई नै परदेशी गायक भन्नुको कारण के हो?
👱👉 हो सामाजिक संजालमा मैले गाएका धेरै गीतहरुले धेरै लाईक कमेन्ट र सियर पाउने गरेका छन। म आफै परदेशी भएको नाताले धेरै परदेशीका पिडाका गीतहरु गाउने गर्छु त्यसैले पनि होला मायाँ गर्दिनु हुन्छ। खोई परदेशी गायक मलाई भनिनु राम्रो होकि होइन भन्ने म आफैलाई नै थाहा छैन। धेरै अग्रजहरु पनि हुनुहुन्छ परदेश बाट संगीत कर्ममा लाग्ने तर मलाई धेरै न्युजहरुमा पनि धेरै साथीहरुले पनि परदेशी गायक भन्ने गर्नु हुन्छ। सायद यो पनि मायाँ होला।
प्रस्न न: ११👤 परदेशमा बस्नेहरुले सुर्य खड्का लाइ”परदेशी गायक” बनाएको भन्छन हुन पनि एक हिसाबले हो पनि। र अर्को कुरा पनि छ सुर्य खड्का अबको पहिलेको सुर्य खड्का रहेनन, नाम र दाम कमाउन थाल्यो र घमण्डको टुसा पलाउन थाल्यो भन्ने मान्छेहरु पनि छन सायदै तपाईंको कान सम्म यो कुरा नपुगेको होला! के सुर्यको जिवनमा अब ती मान्छेहरुले गरेको समालोचना साचो हुँदै गएको हो त? घमण्डका टुसाहरु पलाउन थालेका हुन त? कि आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टन गर्न आफुले आफुलाइ बदल्नु भएको हो?
👱👉 म आफै परदेशी भएको हुनाले,परदेशी पिडाका गीतहरु बडि गाएको छु। हो मलाई परदेशमै रहेका धेरै दर्शक स्रोता भगवान हरुले मायाँ गर्नु भएको छ। त्यसको अर्थ नेपालमै रहनुहुने दर्शक स्रोता भगवान हरुको माया पाईन भन्ने होईन।मेरो सबैलाई सम्मान छ।
हे…हे ममा घमण्डको टुसा पलायो भन्नु स्वभाबिक पनि हो किन भने म परदेशमा छु मेरो दिनमा १०/१२ घण्टा काम हुन्छ, घर परिवार बाल बच्चा सँगै छौ तेसैले अहिले धेरै म्यासेजहरु आउने गर्छन मनमा हुदा हुदै पनि सबैलाई राम्रो रेस्पोन्स गर्न सकेको छैन त्यसैले त्यो पर्न गएको हुन सक्छ ।। तर ममा साच्चिकै घमण्ड बड्ने ठुलो बन्ने अरुलाई नगन्ने कहिलै हुने छैन। अर्को कुरा मलाई थाहा छ हामीलाई गायक बनाउने चर्चामा ल्याईदिने सबै दर्शक स्रोताकै हात हो उहा हरु सँगनै घमण्डको टुसा पलाएत आफु पतन हुने बाटो हो भन्छु म।।
प्रस्न न: १२👤 जापानमा हुने प्राय सबै सास्कृतिक कार्यक्रमहरुको एकलौटी राजा हुनुभएको छ जापान भन्दा बाहिरका देशहरुबाट कतिको अफर आएका छन र तपाइँले एउटा स्टेज चढे बापत तपाईंले लिने पारिश्रमिक कति हो?
👱👉 हे.. हे राजा नैत होईन तर म १० बर्ष अगाडि बाट जापान मा छु जापान बाटै गीत संगीतमा पनि दु:ख गरिरहेको छु।त्यसैल यहाँका धेरै कार्यक्रहरुमा अवसर पनि पाउने गरेको छु।अहिले सम्म जापान बाटै बहिरी देशको यात्रा २ चोटि UK १ चोटि कतारको भयो। आज भोली धेरै देशहरु बाट कुरा आईरहेको हुन्छ तर फिक्स भएको छैन।
मैले पारिश्रमिक कार्यक्रमको प्रकृती हेरेर लिने गरेको छु।
प्रस्न न: १३👱 लोक गित संगीतमा लागेर कलाकारहरु बाच्न सक्ने रोजिरोटिको संभावना कतिको छ अहिलेको अबस्थामा?
👱👉केही छदै छैन भन्ने होईन, आफुमा प्रतिभा छ र मेहनतका साथ लाग्ने हो यो क्षेत्र नाम संगै केहि दाम पनि कमाउन सकिन्छ। राज्यले पनि केहि गर्न जरुर छ। तर पछिल्लो समय केहि चलेका कलाकार बाहेक अरुलाई गाह्रो छ।
प्रस्न न: १४ 👱 तपाईंका प्राय गितहरु माया पिरतिमा बिछोड र अलि बढी निराशा जस्तो लाग्दैन तपाईंलाइ? कि हिटै हुनको लागि यस्ता गितहरु बढी गाउनु हुन्छ?
👱👉नाई मेरा धेरै गीतहरु परदेशीका पिडाहरु समेटिएका छन।।अरु खाल गीतहरु पनि गाएको छु। हिट हुन भन्दानी सिर्जना हो कति बेला कस्तो सिर्जना फुर्छ भन्ने थाहै हुदैन।
प्रस्न न: १५ 👱 संदेश मुलक र चेतनामुलक गितहरु पनि सुर्य खड्काले गाए सुन्न र हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दर्शक श्रोताहरुको चाहना कहिले पूरा होलान त?
👱👉 मेरा १/२ गीत सन्देश मुलक पनि म जस्तै भर्खरै बजारमा आएको गीत ‘न आउ मेरो भाई’ पनि सन्देश मुलक गीत नै हो।। भोलिका दिनहरुमा पनि बिवादमा आउने भन्दा संदेश मिलक र चेतनामुलक गीत नै गाउने छु।
प्रस्न न: १६ 👱 लोकदोहोरी श्रेत्रमा देखिएका विकृती विसङ्गति के के हुन?अहिलेको अवस्थामा यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ?
👱👉 समय सँगै केहि परिवर्तन हुनूत ठिकै पनि हो तर अहिले लोक गीत दोहोरी गीत भनेर भन्नै नसकिने गरि बिकृती हरु भित्रीएका छन,जो मैले भन्नै पर्दैन सबैले छर्लङै देख्न सक्छौ।यसको समाधनका निमित्त त सरकारी तह बाटै लोक दोहोरी प्रतिष्ठान सँग समन्वय गरेर कदम चालिनु पर्छ।
प्रस्न न: १७ 👱तपाईंलाई गित गाउन या कुनै लय/शब्द सिर्जना गर्न आउने अफर र तपाईंले गित गाइदिदा, शब्द या लय सिर्जना गरिदिदा तपाईंले लिने पारिश्रमिक कति हो?
👱👉 मैले मेरो ठ्याक्कै रेट बनाएको छैन गीत हेरेर र मेरो मेहनत हेरेर लिने गरेको छु। धेरै त मिठो बोलेर मेरो मन जित्नु भयो भने यतिकै पनि गरेको छु।
प्रस्न न: १८ 👱 आफ्नो ब्यस्त समय हामिलाइ दिनुभएकोमा eनेपाल खबर अन्लाईन डट कमको तर्फबाट तपाइँलाइ धन्यवाद दिन चाहन्छौ र तपाईंको उज्ज्वल साङ्गेतिक जीवन र भविस्याको कामना पनि गर्दछौं। अन्त्यमा: तपाइँलाई अत्यन्तै माया गर्ने दर्शक, श्रोता, शुभ चिन्तक पाठकहरुलाइ eनेपाल खबर डट कम को यो अन्तर्वार्ता मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ?
👱👉मलाई मेरा मनका कुरा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा eनेपाल खबर परिवार र Timalsina Nabaraj सरलाई हृदय देखीनै धन्यवाद दिन चाहांन्छु। मेरा दर्शक स्रोता भगवानहरु लाई त मेरो त्यहि आग्रह हुन्छ नेपाली गीत संगीत लाई मायाँ गर्दिनु होला नेपाली कलाकारलाई मायाँ गर्दिनु होला।। यहाँहरुकै मायाँले परदेश बाटै गीत संगीतमा ताते ताते गरेको सुर्य खड्कालाई पनि मायाँ गर्दिनु होला।
२८ असार २०७५, बिहीबार ०६:०५ मा प्रकाशित